हस्तमैथुन गर्दा असर गछ या गर्र्दैन एक चोटी अवस्य पढ्नु होला – Tungoon
होमपेज » राेचक » विकास » विचार » समाचार » सुरक्षा » स्वास्थ्य
Admin 12:00 pm
काठमाडौं । चैत २० गते
नेपालीहरूमा रहेको हस्तमैथुनसम्बन्धी भ्रमले चिकित्सकहरूको पनि टाउको खाइसक्यो। यौन चाहना मेटाउने यो सुरक्षित उपायलाई भ्रमको भुमरीमा पारिएको छ। हस्तमैथुन नगरी पनि बस्न नसक्ने, गर्दा पनि के के न बिराएँ भनी चिन्ता गर्नेको ठूलो जमात छ।
पूर्वीय दर्शनमा वीर्यको तुलना रगतसँग गरिन्छ। १०० थोपा रगत बराबर १ थोपा वीर्य हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यसले गर्दा पनि हस्तमैथुन गर्नेहरूले आफूलाई कमजोर भएको ठान्छन्। यौन चाहना पूरा गर्न गरिने हस्तमैथुनले जो कोहीलाई पनि स्वस्थ र फूर्तिलो बनाउँछ।
पछिल्लो समयमा चिकित्सकहरूले ‘धात सिन्ड्रोम’ भन्दै हस्तमैथुन गर्न हौसाइरहेका छन्। बढ्दो एचआइभी संक्रमण, यौन रोग, बलात्कार घटाउन युवाहरूलाई हस्तमैथुन गर्न प्ररित गरिएको छ। चिकित्सका अनुसार वीर्य स्खलन हुँदा कमजोर हुन्छु भन्नु थुक्दा मुख सुक्यो भन्नुजस्तै हो। पिच्च–पिच्च थुकिरहे पनि मुख सुख्खा हुने गरि कहिल्यै सुक्दैन।
वीर्य स्खलन भएर सकिने चिज पनि होइन। अण्डकोष स्वस्थ रहुन्जेल यसको निर्माण प्रक्रिया एकदम तीव्र गतिमा हुन्छ। एक अध्ययन अनुसार ९५ प्रतिशत पुरुषले हस्तमैथुन गरेकै हुन्छन्। हस्तमैथुनले विवाहपछि यौनजीवनलाई कुनै असर गर्दैन। ।
सुडानमा महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा भेडालाई तीन वर्ष जेल
भदौ ३ मा रिलिज हुने चलचित्र ‘प्रेमगन्ज’को टिजर कपिराइट फ्रिगर्ने निर्णय
छैटौं उपत्यकाव्यापी धिमे बाजा प्रतियोगिता हुने भक्तपुरमा हुदै
काठमाडौंमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव
सुखीहरूको गाउँ घले गाउँ
वास्तु शास्त्रका अनुसार बालबालिकाको शयन कक्ष कस्तो बनाउँने ?
आजदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै
वास्तु शास्त्रका अनुसार घरको पुजास्थल कस्तो बनाउने ?
फर्सी,बेथे र लट्टे साग खानुका फाईदाहरु
यौनसम्पर्कको लागि महिलालाई तयार पार्ने ११ अंग
महिलाहरुसँग सोध्न नहुने यि ७ कुराहरु